Toni Kroos oo niyad jab ka muujiyay natiijooyinka xun ay la kulantay Real Madrid kulamadii lasoo dhaafay – Gool FM
Toni Kroos oo niyad jab ka muujiyay natiijooyinka xun ay la kulantay Real Madrid kulamadii lasoo dhaafay
(Real Madrid) 08 Okt 2018. Toni Kroos ayaa muujiyay sida uu kaga niyad jabsan yahay natiijooyinkii lasoo dhaafay ay la kulantay xiliyadii lasoo dhaafay kooxda Real Madrid, gaar ahaan labadii isbuuc ee lasoo dhaafay tartamada horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League.
Laacibka reer Germany ayaa ku soo qoray bartiisa Twitter-ka “Laba todobaad oo natiijooyin niyadjab leh iyo sidoo kale nasiib xumi, waxaan u qalanay inaan helno dhibco badan, sababtoo ah ma aanan u ciyaarin si liidata”.
“Waxaan heesanay waqtiyo aad u fiican saddexdii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay, waxay noqon doontaa caqabad weyn, si aan markale hormar u sameyno, Hala Madrid”.
Si kastaba Real Madrid ayaa guuldareesatay 3 kulan 4-tii kulan ugu dambeesay ay ka ciyaareen dhamaan tartamada kala duwan.
Faah faahinta heshiiska Arsenal iyo Adidas (Waa kan 3-aad ee ugu qaalisan kooxaha yurub)
“Inaan ka ciyaaro Real Madrid waa riyada tan iyo caruurnimadeyda” _ Hazard oo markale ka hadlay kooxda Los Blancos